Soundcore Liberty3Pro သည် ANC နှင့် အဓိပ္ပါယ်မြင့်သော | Gadget သတင်း
Soundcore Liberty3Pro သည် ANC နှင့် မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်အတူ အခြားရွေးချယ်စရာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | 05/11/2021 13:00 | ပစ္စည်းများ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ယေဘုယျ, reviews
တေးရေး Cambridge Audio သို့မဟုတ် Jabra စတိုင် Gadget News တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည့် အခြားသူများကဲ့သို့ပင် အရည်အသွေးမြင့် စံချိန်စံညွှန်းများဖြင့် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဤကြမ်းတမ်းသောကဏ္ဍတွင် သူ့ကိုယ်သူ တည်ထောင်ထားသည့် အသံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Soundcore နဲ့ အခုပဲ လုပ်ငန်းစလိုက်ပါ။
သုံးစွဲသူများနှစ်သက်စေမည့် ANC နှင့် Hi-Res အသံပါရှိသော TWS နားကြပ်များမှ Liberty3Pro အသစ်ကို လေးလေးနက်နက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ Soundcore Liberty3Pro မည်ကဲ့သို့ ထင်ရှားပေါ်လွင်ပြီး ထိုကတိများအားလုံးအပေါ် အမှန်တကယ် ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ရှာဖွေပါ။
2 နည်းပညာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် "ရွှေအသံ"
4 ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် "ပရီမီယံ" ထုတ်ကုန်၏ အသေးစိတ်အချက်များ
ဤ Liberty3Pro တွင် ကွဲပြားသော ဒီဇိုင်းတစ်ခု ရှိပြီး အချို့သည် အခြားသူများ၏ တိုက်ရိုက်ကော်ပီဟု ထင်ရသည့် TWS နားကြပ်များအတွက် စျေးကွက်တွင် တန်ဖိုးထားရသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ Soundcore သည် ၎င်း၏ကိစ္စတွင်ပင် ကွဲပြားသည့်ဒီဇိုင်းတစ်ခုအတွက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ကတိပြုထားပြီး၊ ၎င်းသည် အပေါ်မှလျှောလျှောဖြင့်ဖွင့်ထားသော "တိုင်ပုံး" နှင့်တူသည်။ အရောင်အနေနဲ့ကတော့ အဖြူရောင်၊ အစိမ်းရောင် မီးခိုးရောင်၊ lilac နဲ့ အနက်ရောင်တို့ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့နားနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပတ်ပတ်လည်တွင် ရော်ဘာအစီအရီရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပြုတ်ကျပြီး မှန်ကန်စွာ အကာအကွယ်မပေးပါ။ ဤအရာအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့သည် နားတွင်းနားကြပ်များနှင့် အမှန်တကယ် ဆက်ဆံနေသည်ဆိုသည်ကို မမေ့ဘဲ ၎င်းတို့သည် နားထဲသို့ ထည့်ထားသည်။
အထုပ်အမျိုးအစား - နားကြပ် + ဆီလီကွန်နားကပ် ရှစ်ခု + ပြင်ပအားဖြည့်ပစ္စည်း3ခု + အားသွင်းအိတ် + အားသွင်းကြိုး။
Case အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန် 7,1 x 5,5 x 2,7 စင်တီမီတာ နှင့် 45 ဂရမ်
၎င်းတို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက Amazon တွင် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဤနည်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းဖြင့် နားအတွင်းရှိ ဖိအားများကို လျှော့ချပေးသည့် စနစ်မှတဆင့် လေလည်ပတ်မှုကို ခွင့်ပြုကာ နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုကို ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အခြေခံအကျဆုံး ergonomic grip point သုံးခုရှိပြီး ထိပ်တွင် "fin"၊ အောက်ခြေရှိ ရာဘာနှင့် ဆီလီကွန် pad ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သော ချုပ်ကိုင်မှု။ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အလွန်အဆင်ပြေသည်။
အခုတော့ နည်းပညာပိုင်း သက်သက်ကို ရောက်သွားပါပြီ။ ၎င်းတို့ကို အရွယ်အစားကို လျှော့ချရန်နှင့် အသံ၏ကြိမ်နှုန်းများကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အရှေ့ကင်မရာနှင့် တည်ဆောက်မှုဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် သံချပ်ကာ ယာဉ်မောင်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် 10,6 မီလီမီတာ ရွေ့လျားနိုင်သော ယာဉ်မောင်းလည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းမိုက်ခရိုဖုန်းများအပါအဝင် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုစနစ်မှတစ်ဆင့် ACAA 2.0 coaxial အသံနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။
ပံ့ပိုးပေးထားသော အသံကုဒ်ဒစ်များသည် LDAC၊ AAC နှင့် SBC၊ အခြေခံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် Qualcomm ၏ aptX စံနှုန်းနှင့် မကိုက်ညီသော်လည်း မြင့်မားသော resolution အသံကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လွတ်လပ်သော စစ်မှန်သောကြိုးမဲ့နားကြပ်များဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း မှတ်သားထားသင့်ပြီး ၎င်းတို့ကို မည်သည့်ပြဿနာမှမရှိဘဲ သီးခြားအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ငါတို့မှာ ဒီနည်းရှိတယ်။ HearID စနစ်မှတဆင့် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် နှင့် အသံကို သုံးဖက်မြင်ဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ သင်သူတို့နှင့်အတူ လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ ပြုလုပ်ချင်သေးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အတိုင်း၊ အသိအမှတ်ပြုထားသော ရေစိုခံမှုကို လက်လွတ်မခံနိုင်ပါ။ IPX4 ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နိုင်သည့် အသုံးပြုမှုအများစုကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များတွင် အတွင်းပိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အချက်အလက်အပြည့်အစုံမရှိပါ၊ ၎င်းသည် Bluetooth5ဖြစ်ကြောင်း သိရှိပြီး အထက်ဖော်ပြပါ LDAC ကုဒ်ဒက်သည် စံ Bluetooth ဖော်မတ်ထက် ဒေတာသုံးဆပိုမိုများပြားသော Hi-Res အသံအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးထားကြောင်း၊ . Anker Soundcore...
Artificial Intelligence ပါရှိသော ပေါင်းစပ်မိုက်ခရိုဖုန်း ခြောက်လုံးသည် ဤ Liberty3Pro ၏ ဆူညံသံကို ချေဖျက်နိုင်စွမ်း အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စမ်းသပ်မှုများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ တန်ဖိုးထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါတွေအားလုံးရှိနေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရသာနှင့် လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ မတူညီသောရွေးချယ်စရာသုံးခုကို အခွင့်ကောင်းယူနိုင်ပါသည်။ သူတို့ခေါ်တာ ဘာလဲ။ HearID ANC သည် နား၏အပြင်ဘက်နှင့် နားအတွင်းပိုင်း၏ acoustic အဆင့်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ခံစားရသည့် ဆူညံသံအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ဆူညံသံပယ်ဖျက်ခြင်း အဆင့်သုံးဆင့်ကို အနိမ့်ဆုံးမှ အမြင့်ဆုံးအထိ ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင်နောက်ထပ်မွမ်းမံမှုတစ်ခုအထိမပါဝင်သောကြောင့်ဤစနစ်အား Enchance Vocal Mode ဟုခေါ်တွင်သောဒဏ္ဍာရီလာ "ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမုဒ်" ကိုကျွန်ုပ်တို့မစမ်းသပ်နိုင်ဘဲဒဏ္ဍာရီလာ "ပွင့်လင်းမြင်သာမုဒ်" ကိုမေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲဤအရာအားလုံးကိုမေ့ပစ်ပါ။
ဤအရာအားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၌လျှောက်လွှာရှိသည်။ တေးရေး (အန်းဒရွိုက် / iPhone ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များစွာနှင့် ကောင်းမွန်သော user interface ဖြင့်)။ ဤအပလီကေးရှင်းတွင် ၎င်းတို့၏ ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန်အတွက် နားကြပ်ပေါ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည့် ထိတွေ့မှုများအပေါ် တုံ့ပြန်မှုများကို ချိန်ညှိနိုင်သည့်အပြင် ကျန်စက်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုဆက်တင်များနှင့် နှစ်သက်ရာအချို့ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မည်သို့ဖြစ်နိုင်ပါသနည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဗားရှင်းကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကစားနိုင်သည့် ညီမျှခြင်းစနစ်တစ်ခုရှိသည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် "ပရီမီယံ" ထုတ်ကုန်၏ အသေးစိတ်အချက်များ
Anker ၏ Soundcore သည် ဤနားကြပ်များ၏ mAh ဘက်ထရီပမာဏနှင့် ပတ်သက်သော တိကျသောအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား မပေးနိုင်ပါ။ ဟုတ်တယ် သူတို့က ငါတို့ကို ကတိပေးတယ်။ တစ်ကြိမ်အားသွင်းရုံဖြင့် ၈ နာရီ၊ ဆူညံသံပယ်ဖျက်ခြင်းကို ဖွင့်ထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများတွင် 10 မှ 15 ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချထားသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာ စုစုပေါင်းရှိတယ်။ 32 horas ဒီအမှုမှာ စွဲချက်တင်ထားမယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်း ၃၁ နာရီဝန်းကျင်ရှိပါပြီ။
ဒီ case က နားကြပ်တွေကို အားသွင်းနိုင်စေတယ်။ ၁၅ မိနစ်အတွင်း ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား နောက်ထပ် သုံးနာရီကြာ ပြန်ဖွင့်ပေးသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Case အား USB-C ကြိုးဖြင့် အားသွင်းခြင်း၊ ဒါပေမယ့် မဟုတ်ရင် ငါတို့မှာ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ။ Qi စံနှုန်းဖြင့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း။ ၎င်း၏အောက်ပိုင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အခြေအနေကို အသိပေးသည့် ရှေ့ဘက်ရှိ LED သုံးခု။ ဤဒေတာအားလုံးသည် Liberty Air3Pro နှင့် Liberty2Pro မှပေးဆောင်သည့်အရာများကို အနည်းငယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်တွင်၊ ဤ Liberty3Pro သည် အကောင်းဆုံးအဆင့်တွင်ရှိနေသော်လည်း၊ ဤကဏ္ဍတွင်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ Liberty3Pro ၏ ကောင်းမွန်ပြီး အသေးစိတ်သော အသံအရည်အသွေးကြောင့် သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် ကြိမ်နှုန်းများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အံ့သြမိပါသည်။ ဆူညံသံပယ်ဖျက်ခြင်းမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင့် တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးတွင် ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ကောင်းမွန်သောမိုက်ခရိုဖုန်းများသည် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်များကျင်းပရန် လိုအပ်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှုကိုပေးသည်။ ဘလူးတုသ်ချိတ်ဆက်မှုသည် ကဏ္ဍတိုင်းတွင် တည်ငြိမ်သည်။ သိသိသာသာကြီး၊ ဟုတ်တယ်၊ ဘေ့စ်ရဲ့ အလွန်အကျွံ မြှင့်တင်မှုဖြစ်ပြီး ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့လိုသလောက် မကြာခဏ ကောင်းကောင်းမတုံ့ပြန်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် Amazon တွင် 159,99 ယူရိုဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ နှင့်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ Anker.
Liberty3Pro ကို
ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု တစ်ခါတစ်ရံ ပျက်ကွက်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Soundcore Liberty3Pro သည် ANC နှင့် မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်အတူ အခြားရွေးချယ်စရာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551၊ ၎င်းသည် ဂိမ်းဆော့ပြီး ပရီမီယံဖြစ်သည် [Analysis]
Tronsmart သည် နိုဝင်ဘာလ 11 နှင့် 12 ရက်နေ့များတွင် 70% အထိ အထူးကမ်းလှမ်းချက်များကို စတင်ရောင်းချသည်